SADC Inoita Musangano Wakakosha Unobata Mozambique
Zvita 15, 2020
Mutungamiri weMozambique, VaFilipe Nyusi
Vatungamiri veSADC vakaita musangano wechimbichimbi muguta reMaputo muMozambique wekukurukura pamusoro pekusagadzikana kuripo mudunhu reCabo Delgado.
Kwemakore matatu, Mozambique yange ichirwisana nevarwi vanopfurikidza mwero ve Ahlu Sunna Wa Jama vanehukama ne ISIS uye varikurwira kuumbwa kwenyika iri pasi pechitendero chechi Moslem.
Vatungamiri venyika vakange vari mumusangano uyu vanosanganisa VaEmmerson Mnangagwa, veZimbabwe, VaMokgweetsi Masisi veBotswana, VaCyril Ramaphosa veSouth Africa naVaFilipe Nyusi veMozambique.Mutungamiri weTanzania, VaJohn Magufuli, vakatatuma mutevedzeri wavo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio, muAmerica, Muzvinafundo Elliot Masocha, vanorumbidza zvirikuitwa ne SADC, vachiti nyaya iyi inyaya hombe inoda kushanda pamwe chete kwenyika dzose, kwete nyika imwe chete.
Muzvinafundo Masocha vanorumbidza hurumende yeZimbabwe mukuda kwayo kubatsira kurwisa varwi vanopfurikidza mwero ava, vachiti nyika dze muSADC pamwe chete nenyika dzose dze muAfrica dzinofanira kubatana munyaya yakadai, iyo vanotiinogona kukanganisa magariro emamirioni nemamirioni evanhu munharaunda iyi, pamwe chete ne Africa yose.